Nidaamyo qiimo jaban, nidaamyada meeleynta GPS-ku-saleysan ayaa hadda laga heli karaa mashaariicda qallalan. Nidaamka caadiga ah waxaa ka mid ah kombuyuutar caadi ah oo PC la jaan qaada, oo leh taxane 'Trimble 4000 taxane kaladuwan oo GPS ah iyo barnaamijyada Windows-ka sida HYPACK.
Farsamo yaqaan aqoon u leh ayaa ku rakibi kara nidaamka aasaasiga ah miro yar ama dhexdhexaad ah hal ama laba maalmood gudahood. Mar haddii la dejiyo nidaamka, qofka aqoonta aasaasiga u leh qalabka agabka elektiroonigga ah (sida Loran) ayaa loo tababaran karaa inuu ku shaqeeyo nidaamka wax ka yar laba maalmood.
Sida dhammaan qalabka elektiroonigga ah, nidaamyada GPS maahan dhibaatooyin aan badnayn, laakiin nidaam si habboon loo rakibay waa inuu ugu yaraan yahay boqolkiiba 90 illaa 95 boqolkiiba la heli karo, celceliskanna si joogto ah ayuu u fiicnaanayaa. Waxaa jira xoog iyo daciifnimo, iyo qaar ka mid ah dalabyada mashruuca ayaa kufiican kuwa kale.
Si habsami leh loo dejiyay loona rakibay, inta badan deegaannada bada nidaamka GPS-ka waxay ka warbixin doonaan boosaska waqtiga-dhabta ah cusboonaysiinta hal-ilbiriqsi gudahood hal mitir ama ka yar meesha dhabta ah. Tani waa mid aad uga kalsoonaan kara labada microwave ama nooc jireed.
Meesha dredge ama cut cuthead waxaa lagu muujiyaa waqtiga-dhabta ah kormeerayaasha lagu dhejin karo ku dhawaad ​​meel kasta oo hawadu ka hortag tahay oo ku taal dusha webiga. Boosaska waxaa lagu dooran karaa kombuyuutarka oo dib ayaa loogu soo celin karaa si dib loogu eego horumarka shaqada. Muuqaalkan kaliya wuxuu cadeeyay inuu qiimo badan ku leeyahay la socoshada nashaadaadka nabaad-guurka. Aad bay u fududahay in la qorsheeyo aagagga la goostay, dib-u-milicsiga wasakhda iyo galitaanka carqaladaha. Ka sokow booska qulqulaya, kormeeruhu wuxuu si jaantus ah u muujin karaa dulucda aagga la jajabiyey, xaddididda kanaalada, saldhigga, xirmooyinka iyo carqadaha.
GPS waa nidaamka cimilada oo dhami. In kasta oo saxsanaan laga yarayn karo daboolka daruuriga culus, barafka ama ceeryaanta, waxaa loogu talagalay inay ku shaqeyso saxsanaanta ku filan inta badan xaaladaha.
Ma jiraan tilmaamayaal jidheed, laami ama saldhigyo xeebeed oo la dayactiri karo, la waari karo ama loo adeegsan karo (halkaasoo sixitaanno kaladuwan laga heli karo hawo-mareenka dadweynaha). Dayactirka nidaamka ayaa yar. Markaad dhammeysato bilowga iyo tababarka, mashruuc caadi ah ayaa wax looga qaban karaa wax ka yar hal wicitaan bil kasta iyo marmar wicitaan farsamo yaqaan.
GPS luminta saxnaanta ama waxay u shaqeyn kartaa si khaldan marka xaaladaha "multipath" ay jiraan. (Multipath waxaa sababa marka astaamaha dayax gacmeedka ay ka tarjumayaan dusha sare ee biraha waaweyn.) Ilaha badan ee bay'ada badda waxaa ka mid ah wiishashka waaweyn ee wiishka, maraakiibta iyo haamaha shidaalka. Xaaladahaas oo kale, hawlwadeenku waa inuu joojiyaa hawlgalka illaa inta laga helayo ilaha badan ee aagga, ama uu adeegsado adeegyo xadidan oo xadidan.
Qulqulka biyuhu waa inuu lahaadaa meel macquul ah oo nadiif ah oo qolka qalalan si loogu habeeyo kombiyuutarka iyo qalabka. Kombiyuutarada caadiga ahi si fiican uma shaqeeyaan kuleylka aadka u daran ama qabowga, agagaarka gariir aad u badan ama marka qoyan yihiin. Waxaa taa ka duwan, kombiyuutaro dabacsan oo cimilada ka celiya ayaa la heli karaa; kaliya ayay ka qaalisan yihiin. (Nidaamyada caadiga ah ayaa lagu rakibay si wanaagsan ugana shaqeeyaan cabirka 'Ellicott'® Taxanaha Calaamadaha 370 10 ″ dredge.)
Hawlwadeenada loo yaqaan 'Dredge' ayaa u baahan in lagu tababaro isticmaalka kombuyuutarka iyo softiweerka. In kasta oo barnaamijyada cusubi ay yihiin kuwo "adeegsade-saaxiibtinimo leh", haddana waqtiga tababbarku si aad ah ayuu u kala duwanaan karaa, iyadoo ku xidhan aqoonta qofka. Guud ahaan marka laga hadlayo, waa inuu jiraa qof waqti-buuxa ah oo mashruuca ku jira oo leh caddaalad iyo xirfado kombuyuutar oo wanaagsan.
In kasta oo si aad ah looga fududeeyay qalabkii hore, waxaa ugu wanaagsan haddii nidaamyadan la rakibo, la dejiyo oo la ilaaliyo xirfadlayaal. Shirkadda bixinaysa nidaamka waa inay ku bixisaa adeeggan qiimo macquul ah.
In kasta oo qalabka la isku halleyn karo, guuldarro ayaa dhici karta. Hubso inaad ogaato halka aad ka heli karto nidaam gurmad ah (badiyaa shirkadda kirada ah).
Shantii sano ee la soo dhaafay, CLE waxay ku rakibtay dhowr nidaam oo meelaynta elektiroonigga ah meela kala duwan iyo doomaha sahanka. Waxaan u beddelney alaabada barkadda kirada oo keliya nidaamyada GPS ee Trimble, iyo barnaamijka Xeebaha Oceanographics HYPACK.
Qalab dhowaan la rakibay ayaa loogu talagalay AGM Marine oo loogu talagalay mashruuc qallafsan oo ka dhaca Provincetown, Massachusetts. AGM wuxuu adeegsaday Ellicott® Taxanaha Brand 370, oo leh xaddidan laakiin ku filan qolka cabitaanka. Kumbuyuutarka ayaa lagu rakibay shelf oo ka laadlaada saqafka hoose, iyadoo kormeeraha si toos ah looga ganaaxay hoostiisa. GPS-ka iyo korontada waxaa lagu rakibay sanduuq biyuhu ay galaan oo ka dambeeya kursiga wadaha. Matoorro yaryar ayaa loo isticmaalay in lagu bixiyo koronto.
Qandaraasku wuxuu ahaa hagaajinta qashin-qaadista kanaalka laga soo galo marinka ballaadhkiisu gaadhayo 250-fuudh ee laga gaadho Dekedda Provincetown. Goobta laga qodayo waxay ahayd qaab aan caadi ahayn. CLE waxay sawir ka samaysay kormeeraha kumbuyuutarka kaas oo muujiyey xadka kanaalka, 50-cag is-beddel ah, saldhigyo 50-cagood ah iyo tilmaam ku saabsan qoditaanka saxda ah iyo meelaha ka qoto dheer. Bandhigani wuxuu u fududeeyay kormeeraha guud ee jiidaha inuu indho indheeyo booska qodidda ee la xidhiidha qorshayaasha, iyo inuu ka gudbo aagagga “qodid la’aanta”. Mar haddii dariiqa laynka saaran yahay, hawlgalka caadiga ah ee kumbuyuutarka ayaa lagu koobay siddeed furayaal: <+> iyo <-> si loo soo jiido oo loo soo baxo, afar fureyaal fallaadh ah oo dib loogu dhejiyo sawirka shaashadda markii qodku dhaqaaqay, iyo markii la galayay xaaq magaabay, furayaasha "s" iyo "e" bilowga iyo dhamaadka xaaqida.
Ka sokow faa'iidooyinka muuqda, qandaraaslaha wuxuu helay awood dheeri ah oo uusan horay u filayn. Iyada oo ay ugu wacan tahay darxumo xad dhaaf ah, taraafikada doonta, iyo cimilo ba'an awgeed, qulqulka waa in looga wareejiyaa saldhigga si joogto ah. Xaalad kasta, kormeeraha dugsiga sare wuxuu awood u yeeshay inuu faahfaahin ka bixiyo goobta saxda ah ee qulqulka ka hor inta uusan dhaqaaqin oo uu dib ugu soo celiyo isla meeshii saxda ahayd markii shaqada dib loo bilaabay. Intii mashruucu socday, qulqulaha ayaa la kulmay carqalado badan oo ah qaab wareega iyo qashinka burburay. Mar labaad kormeeraha wuxuu awooday inuu si sax ah ugu warbixiyo meelihii carqaladahaas ka dhacay injineer Corps deggan isagoo akhrinaya xiriiriyaasha si toos ah kormeeraha. Kadib markii la dhammeystirey sahankii hore ee dib-u-soo-bixinta, CLE wuxuu awooday inuu siiyo soo-bandhig cusub oo loogu talagalay qalabka kormeeraha oo si sax ah u qeexey aag kasta ee u baahan dib-u-qashin-gooynta. Tani waxay u oggolaatay kormeeraha inuu si dhakhso leh oo dhaqso leh ugu guuro goob kasta oo aan lahayn wax mala awaal ah.
AGM waxay hore u adeegsan jirtay nidaamyada meeleynta microwave-ka waqti hore waxayna ogaatay in xirmada GPS ay aad uga qiimo jaban tahay uguna kalsoon tahay uguna habboon tahayna saaxiibtinimo. Sidoo kale, qiimaha rakibaadda, dejinta, tababarka iyo heshiiska kiradda qalabka ayaa ka yaraa kharash ka sarreeya qiimeynta boosaska sahaminta meelaynta jireed.
Shaki kuma jiro in codsiyada suurtagalka ah ee GPS-ka ay ku burburinayso ay bilaabeen inay soo baxaan. Maaddaama qalabka iyo softiweerku sii wadayaan inay horumariyaan, faa iidooyin cusub oo tartan ayaa laga heli doonaa kuwa u adeegsada inay hoggaamiyaan. Xaqiiqdu waxay tahay iyada oo ciriiriyada deegaanka ay sii adkeynayso, kharashaadka dhimaya halkii mitir cubic ayaa sii socon doona. Awoodda geedka qulqulka lagu xakameeyo xaddiga qulqulaha iyo yareynta waqtiga dib-u-laqeybinta ayaa noqda qodobka go’aamiya qofka ku guuleysta ama luminayo mashruuc. Jaangoynta meelaynta-waqtiga dhabta ah ee qulqulaha ayaa aasaas u ah xakameynta labadan arimood.
Waxaa laga soo xigtay Dib-u-eegista Qodista Caalamiga ah
Ku Bilaab Mashruucaaga Kala Duwista Yar-yar Ellicott